Al-Qaacida oo xaqiijisay geerida Osama Bin Ladin kuna hanjabtey aargudasho culus – SBC
Al-Qaacida oo xaqiijisay geerida Osama Bin Ladin kuna hanjabtey aargudasho culus
Shabakada Al-Qaacida ee uu hogaamin jirey Osama Bin Ladin ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen geerida Bin ladin iyagoo wacad ku marey inay geysan doonaan weeraro aargudasho ah oo ay ku ekeyn doonaan Mareykanka & xulufadiisa.
Bayaan ka soo baxay Al-Qaacida oo ku aadanaa xaqiijinta Osama ayaa la soo dhigey bar Internet oo ay leeyihiin kooxdu waxaana lagu sheegay in dhiiga Osama aanu ahaan doonin mid baaba’a ama tirtirma.
Bayaanka ka soo baxay Al-Qaacida waxaa lagu xusey in dhiig cusub oo hor leh ay daadin doonaan iyagoo nidir ku marey in ay u aargudi doonaan hogaamiyahooda.
Al-Qaacida waxay bayaankeeda ku sheegtey in ay soo baahin doonaan dhawaan cajalad cod ah oo uu duubay Osama Bin Ladin todobaad ka hor geeridiisa.
“Dhiiga Sheikh Osama wuxuu ahaan doonaa baaqi, Allaha weyn agtii. Allahaasoo duliyeeyey Ameerika iyo kuwa raacsan waxaana ka raadsan donaa gudo iyo dibad” ayaa bayaanka lagu yiri iyadoo bayaanka lagu sheegay in fikirkii Osama uu ahaan doono mid sidiisii u taagan. “Farxadoodu waxay isku bedeli doontaa murugo, waxaana isku darsami doona dhiigoodda & baroortooda” ayaa lagu yiri bayaanka Al-Qaacida oo sidoo kale ugu baaqay dadka reer Pakistaan inay kacaan oo ay ka dhiidhiiyaan dilka Osama ayna ku dhaqaaqaan kacdoon isla markaana ay dalkooda ka dhaqaan ceebta ay u keeneen jawaasiista & tuugada, ayna wadanka guud ahaan ka nadiifiyaan wasaqda Ameerikaanka kuwaasi oo faafiyey musuqmaasuq.
“Waxaan cadeynaynaa in dhiiga dagaalyahanka barakeysan Sheikh Osama Bin ladin ALLAHA xafidee uu qiimo weyn ku yahay dhamaan Msulimiinta mana ahaan doono dhiig qiimo daran” ayaa bayaanka lagu xusey. Bayaankan wuxuu u gogol xaarayaa in Al-Qaacida ay magacowdo qofkii badali lahaa Osama Bin Ladin, iyadoo ay u badan tahay in uu noqonayo ku xigeenka Ayman al-Zawahiri kaasi oo ah musharaxa loo badinayo.
shujaac yare says:
masha allah alle ha unaxariisto walaalkeen usama wuxuu qeyb lixaad leh kagaystay jihaadka caalamka meel kastay ahaataba xatta soomaaliya waxaana urajaynaynaa in allah kitaabkiisa gacanta kasii kana mid noqdo kuwa aan janada kabaha looga siibin ee u shafeeca qaada qaraabadiisa iyo walaalihiisa kale ee mujaahidiin allah ayaan markasta ubaryaynaa insha allah walaalkeen waxaana aniga ogahay usama inuu ahaa fikrad loosoo diray walaalha mujaahidiintaa ee kunool caalamka fikradna madhimatee ninkiida ayaa dhinta boqolaal usaama ladhaho wweyjoogaan fikradiisiina weyjoogtaa waxaana ubalanqaadaynaa intuu hal qof oo muslima nool yahay i loo aargudi doona insha allah